ဆိုချီမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 43°35′07″N 39°43′13″E﻿ / ﻿43.58528°N 39.72028°E﻿ / 43.58528; 39.72028ကိုဩဒိနိတ်: 43°35′07″N 39°43′13″E﻿ / ﻿43.58528°N 39.72028°E﻿ / 43.58528; 39.72028
၁၇၆.၇၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၈.၂၅ စတုရန်းမိုင်)
၆၅ မီတာ (၂၁၃ ပေ)
ဆိုချီမြို့သည် ကရာ့စနိုဒါး ကရိုင်းတွင်တည်ရှိသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတို့ကြား ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိသည်။ မဟာဆိုချီဧရိယာသည် ၃,၅၂၆ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁,၃၆၁ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်းများအနီး ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေတလျှောက် ၁၄၅ ကီလိုမီတာ (၉၀ မိုင်) ရှည်လျားစွာတည်ရှိသည်။ မြို့၏ အကျယ်မှာဖြင့် ၁၇၆.၇၇ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၆၈.၂၅ စတုရန်းမိုင်). ရှိသည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ရှားပါးသော အပူလျော့ပိုင်းရာသီဥတုရှိသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် နွေးသောဥတုရှိကာ ဆောင်းရာသီ၌ အအေးလျော့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Ref1481
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named GSE
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Mus
↑ ၄.၀ ၄.၁ Official website of Sochi
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Городское Собрание Сочи. Решение №89 от 14 июля 2009 г. «Об утверждении генерального плана городского округа города Сочи». Вступил в силу со дня опубликования. (City Assembly of Sochi. Decision #89 of July 14, 2009 On the Adoption of the General Plan of the Urban Okrug of the City of Sochi. Effective as of the publication date.).
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named 2010Census
↑ ၇.၀ ၇.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Ref753
↑ Город Сочи стал короче - http://edemkavkaza.ru
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆိုချီမြို့&oldid=459468" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။